Nnwom 73 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Obi a ɔdɔ Onyankopɔn ani baa ne ho so
“Ɛkaa ketewaa bi anka mereman” (2)
“Mefaa ɔhaw mu daa nyinaa” (14)
‘Kosii sɛ mekɔɔ Onyankopɔn tenabea kronkron no mu’ (17)
Nnebɔneyɛfo gyina nea ɛhɔ yɛ toro (18)
Eye sɛ mɛbɛn Onyankopɔn (28)
Asaf+ dwom. 73 Ampa, Onyankopɔn ye ma Israel, oye ma wɔn a wɔn koma mu tew.+ 2 Me de, ɛkaa ketewaa bi anka mereman;Ɛkaa kakraa bi anka merehwe ase.+ 3 Efisɛ m’ani beree ahantanfo,*Esiane sɛ, bere biara mihu sɛ nnebɔneyɛfo wɔ asomdwoe.+ 4 Wɔmmrɛ ansa na wɔawu;Wɔwɔ apɔwmuden.*+ 5 Ɔhaw a nkurɔfo fa mu no, ebi nka wɔn,+Na amanehunu a ɛto nnipa nyinaa no, ebi nto wɔn.+ 6 Ɛno nti wɔde ahantan ayɛ kɔnmuade;+Wɔafura awudisɛm sɛ ntama. 7 Wɔn ahonyade* ama wɔn aniwa ayeyɛ akɛse;Wɔanya aboro nea wɔn koma pɛ. 8 Wɔtweetwee nkurɔfo, na wɔkeka nsɛmmɔne;+ Wɔn ahantan nti, wohunahuna nkurɔfo sɛ wɔde nhyɛso bɛba wɔn so.+ 9 Wɔhoahoa wɔn ho kodu soro,Na wɔmoma wɔn ho so wɔ asaase so de wɔn tɛkrɛma keka nea wɔpɛ. 10 Enti Onyankopɔn nkurɔfo de wɔn adwene kɔ wɔn so,Na wɔnom wɔn nsu bebrebe no bi. 11 Wɔka sɛ: “Onyankopɔn bɛyɛ dɛn ahu?+ Enti Ɔsorosoroni no nim biribiara ampa?” 12 Anokwa, saa nnebɔneyɛfo yi, daa wonya no fow.+ Da biara na wɔn ahode redɔɔso.+ 13 Ampa, me komam a matew,Ne me nsa a mahohoro de akyerɛ sɛ me ho nni asɛm no nyinaa yɛ ɔkwa.+ 14 Mefaa ɔhaw mu daa nyinaa;+Minyaa animka anɔpa biara.+ 15 Nanso sɛ mekaa nsɛm a ɛte saa a,Anka ɛbɛkyerɛ sɛ mayi wo nkurɔfo* ama. 16 Mebɔɔ mmɔden sɛ mɛte ase,Nanso na ɛyɛ den ma me, 17 Kosii sɛ mekɔɔ Onyankopɔn tenabea kronkron kɛse no mu;Ɛnna mihuu sɛnea daakye ebewie wɔn. 18 Ampa, wode wɔn gyina nea ɛhɔ yɛ toro.+ Woma wɔhwehwe ase na wɔsɛe pasaa.+ 19 Hwɛ sɛnea wɔn asɛm ayɛ mmɔbɔ mpofirim!+ Hwɛ sɛnea mpofirim, awie wɔn bɔne! 20 O Yehowa, sɛnea obi so dae a onyan ma ɛtetew n’ani so no,Saa ara na sɛ wokeka wo ho a, wobɛma wɔn anuonyam abɔ wɔn.* 21 Me de, me koma dii awerɛhow,+Na midii yaw kɛse wɔ me mu.* 22 Ná mente nneɛma ase na na me nimdeɛ sua;Meyɛe sɛ aboa a onni adwene wɔ w’ani so. 23 Nanso afei de, mɛtena wo nkyɛn daa;Wukura me nsa nifa.+ 24 W’afotu na wode kyerɛ me kwan,+Na akyiri yi, wobɛhyɛ me anuonyam.+ 25 Hena bio na mewɔ wɔ ɔsoro? Minni biribiara ho anigye wɔ asaase so ka wo ho.+ 26 Sɛ me nipadua ne me koma gye ne ho mpo a,Onyankopɔn yɛ me koma botan ne me kyɛfa daa.+ 27 Sɛnea ɛte biara, wɔn a wɔtwe wɔn ho fi wo ho no bɛyera. Wɔn a wofi w’akyi kɔbɔ aguaman* no nyinaa, wobɛsɛe wɔn.*+ 28 Na me de, eye ma me sɛ mɛbɛn Onyankopɔn.+ Awurade Tumfo Yehowa na mede no ayɛ me guankɔbeaSɛ mɛka ne nnwuma nyinaa ho asɛm.+
^ Anaa “ahohoahoafo.”
^ Anaa “Wɔn afuru ayeyɛ akɛse.”
^ Nt., “wo mma awo ntoatoaso.”
^ Nt., “wubebu wɔn nipaban animtiaa.”
^ Anaa “Wɔn a wonni nokware mma wo.”
^ Nt., “wobɛma wɔaka wɔn ano atom.”